Shock Absorber, Electric skuuta, Shock Motor - okomoko
Maazị Wu ： 008613216973888
N'ihu Shock Absorber
N'azụ Shock Absorber
Ikuku Shock Absorber
Afọ 10 nke Ahụmịhe Mmepụta!
Lujury Technology Co., Ltd. emi odude ke Tantian Village, Hengjie Town, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province. E hiwere ya na 2002 ma nwee mpaghara osisi nke 10,000 square mita. Ọ bụ ụlọ ọrụ nke oge a na - ejikọ R&D, n'ichepụta yana ire ahịa.
Companylọ ọrụ anyị na-arụpụta ụdị ụdị ngwa ngwa na akụkụ ndị metụtara ya maka ọgba tum tum na ụgbọ ala eletriki. The ụlọ ọrụ na-ewebata oge a na mmepụta ngwá na zuru ezu na-akwado ụlọ ọrụ, onwem na kasị elu ụlọ n'ichepụta technology, n'elu ọgwụgwọ technology na ngwaahịa nzukọ akara.
Ka ọ dị ugbu a, mbupụ ụlọ ọrụ anyị na-abawanye kwa afọ, ma gbasaa karịa mba 10 na mpaghara gụnyere South America, Middle East, North Africa, Thailand, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, wdg, ma nwee aha dị elu na ahịa mba ofesi .
290mm Lujury elu arụmọrụ eluigwe na ala elu qu ...
325mm oke ọnụ eluigwe na ala elu elu rụrụ ...
310mm 320mm gbanwee kemeghi elu àgwà Okanmuta ...
R164 290MM ọgba tum tum n'azụ ujo absorber scoot ...
200-260mm Lujury Factory kpọmkwem saleshigh quali ...
270mm Lujury elu àgwà Hydraulic mgbanwe ...
5gbọ ala 315mm ọgba tum tum ikuku ikuku
2019 ọhụrụ 280mm n'azụ skuuta nkwusioru
Anyị ụlọ ọrụ nwere afọ 15 nke n'ichepụta ahụmahụ.
Ujo anyi di nma ma ahia anyi di ala.
Mgbe izipu, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu gbasara ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị na anyị ga-enye gị ngwọta.
Onye isi njikwa...
Wu Yunfu, onye isi oche nke Taizhou Lujury ...